Dhalashada Finland - InfoFinland
Nolosha Finland > Degidda Finland > Dhalashada Finland
Waxaad codsan kartaa jinsiyadda Finland, haddii aad wakhti dheer deganayd Finland islamarkaasna aad baratay luqada deegaanka. Waxaa kale oo jinsiyadda lagu heli kara waalidka haysata jinsiyadda Finnishka.
Xaaladaha qaar marka lagu jiro waxaa kale oo jinsiyadda lagu heli karaa wargelin. Waxaa kale oo intaas dheer in xaaladaha gaarka ah qaarkood marka lagu jiro jinsiyadda lagu heli karo ku dhalashada Finland.
Codsiga dhalashada Finland
Waxaad dhalashada Finnishka codsan kartaa, markii aad buuxiso 18 sano, aad Finland si rasmi ah u deganayd muddo dheer oo ku filan, aad luuqadda Finnishka ama tan Iswidishka ugu hadli karto ama u qori karto si lagu qanci karo ama si la mid ah uu yahay heerka aqoontaada luuqadda dhagooleyaasha Finnishka ama tan Iswidhish, iyo in qofka aad tahay loo xaqiijiyey si la aamini karo. Intaas waxaa dheer shuruudo kale; Tusaale ahaan waa inaad cadeysaa meesha ay lacagta noloshu kaa soo gasho. Dhalashada waxaad sidoo kale u codsan kartaa carruurta aan qaangaarka ahayn oo aad adigu mas’uul ka tahay.
Haddii aad wax dembi ah gashay ama tusaale ahaan aadan bixin canshuurahaaga, tani waxay caqabad ku noqon kartaa helitaanka dhalashda Finland.
Wixii macluumaad dheeri ah ka akhri bogga InfoFinland Sidee loo codsan karaa dhalashada Finland?
Dhalashada Finland waa wax ka duwan sharciga deganaanshada. Haddii aad hadda qorsheyneysin inaad Finland u guurto, wixii macluumaad dheeri ah ka akhri bogga InfoFinland U soo guurista Finland.
Dhalashada FinlandFinnish | Iswidish | Ingiriis
Isla marka aad adigu codsaneysid dhalashada Finland, waxaad dhalashada u codsan kartaa ilmaha aan weli qaan gaarin, oo aad adigu mas’uul ka tahay. Wixii macluumaad dheeri ah ka akhri bogga InfoFinland Sidee loo codsan karaa dhalashada Finland?
Dhalashada ilmaha dhalanaya
Cunuggu wuxuu jinsiyadda Finland u qaadanayaa si otomaatig ah marka uu dhasho, haddii
cunugga hooyadiis ay tahay muwaadin Finnish ah;
cunugga aabihiis uu yahay muwaadin Finnish ah islamarkaasna uu qabo hooyada cunugga;
cunuggu uu Finland ku dhasho, aabihiis uu yahay muwaadin Finnish ah, aabanimada la xaqiijiyay; ama
uu cunuggu Finland ku dhashay, hooyada aan isaga dhalinan ay tahay muwaadin Finnish ah, hooyanimada hooyada aan dhalinna la xaqiijiyay 1.4.2019 ama kaddib.
Cunuggu wuxuu jinsiyadda Finland ku heli karaa wargelin, haddii uu dibadda ku dhasho, aabihiis uu yahay muwaadin Finnish ah ama hooyada aan dhalin ay tahay muwaadin Finnish ah, waalidkuna aysan isqabin.
Dhalashada Finland waxaa sidoo kale heli kara cunugga ay Finland ku dhalaan waalidiin ajnabi ah, haddii uusan waalidkiis ka helin dhalashada wadanka kale.
Bogga InfoFinland ee ah Finland markii uu ilmuhu dhaso waxaa ku qoran macluumaad loogu talo galay waalidiinta uu ilmahoodu ku dhasho Finland.
Jinsiyada caruurtaFinnish | Iswidish | Ingiriis
Ogeysiinta dhalashada Finland
Dhalashada Finland waxaa sid degdeg ah oo raqiis ah foomka wargelinta ku heli kara
muwaadin hore oo Finnish
cunug dibadda ku dhashay oo aysan waalidkiis isqabin, kaas oo leh aabe Finnish ah ama hooyo aan dhalin oo finnish ah.
qof jira 18-22 sano, kaas oo sannado badan Finland deganaa
Ilmaha adabshanka ah ee muwaadinka Finnishka oo jira 12-17
Muwaadin u dhashay Waqooyiga Yurub oo Finland deganaa shanti sano ee ugu dambeysay
Ogeysiiska dhalashada waxaad ka sameyn kartaa internetka. Foomka codsiga ka buuxi adeegga Enter Finland. Lifaaqyada ku dar codsiga. Sidoo kale bixi lacagta ka baaraan degista codsiga. Markii aad buuxiso ogeysiiska, xusuuso inaad koontadaada kala socoto adeegga Enter Finland.
Markii aad foomka codsiga ka buuxiso adeegga Enter Finland waxaad haystaa mudo sadex bilood ah oo aad ku tagto barta adeegga si waraaqahaaga aqoonsiga loo xaqiijiyo. Waxaad iska xaqiijin kartaa barta adeegga ee Xaafiiska dal u soo guurista ama safaarada Finland ee dibada. Wasaaradda arima dibadda ka hubso safaaradda aad iska xaqiijineysid meesha ay ku taalo. Waqti horay u sii qabso. Horay u sii qaado waraaqahaaga aqoonsiga iyo nuqulka lifaaqyada codsiga oo asal ah.
Haddii aadan awoodin ama aadan aqoon u lahayn inaad ogeysiiska dhalashada ka buuxiso internetka, waxaad sidoo kale foomka ogeysiiska ku buuxin kartaa waraaq ahaan.
Bogagga internetka ee Xafiiska dal u soo guurida waxaad ka heleysaa macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan sida loo sameeyo ogeysiiska dhalashada.
Ogeysiinta jinsiyadaFinnish | Iswidish | Ingiriis
Finland waxay ogoshahay jinsiyadaha badan, waxaa loola jeedaa inaad heysato dhalashada Finland iyo dhalashada dal labaad.
Dowladaha oo dhan ma wada ogola jinsiyadaha badan. Ka hor inta aadan codsan dhalashada Finland waxaa wannaagsan inaad hubsato in jinsiyado badan laga ogol yahay dalka aad u dhalatay. Haddii dowladaadu aysan ogoleyn jinsiyadaha badan waxaad weyn kartaa dhalashada aad hadda heysato marka aad hesho dhalashada Finland.
Jinsiyadaha badan waxay noqon karaan faa’iido laakiin sidoo kale dhibaato. Tusaale ahaan waxaan wannaagsan inaad iska hubiso inaad dhowr dowladood ee aad dhalashada ka heysato inaad ka sameyso waajibka ciidamada iyo inay kugu filan tahay shahaadada uu hal dal kaa siiyay fulinta waajibaadka ciidanka. Jinsiyadaha badan waxay faa’iido ku yihiin tusaale ahaan ka guurista dal iyo u guurista dalka kale ama shaqo raadinta.
Xafiiska dal u soo guurista ayaa ka talo bixiya la xiriira jinsiyadda:
Telefoon 0295 419 626 Talaado, Arbaco iyo Khamiis saacadda 10.00–11.00
Jinsiyadda badan ee cunugga
Cunuggu wuxuu heysan karaa dhalashada Finland iyo mid dal kale. Tani waxay ku xiran tahay in dalka uu aqbalo jinsiyadaha badan ee ilmaha. Arrinta wax ka weydii wakiilka dalkaada.
Ma la lumin karaa dhalashada Finland?
Waxaad lumin kartaa dhalashada Finland, haddii
aad haysato marka aad buuxinayso 22 sano dhalashada dowlad kale, xiriir badanna aadan Finland la laheyn;
aad codsiga dhalashada ama wargelinta dhalashada ku bixisay macluumaad khaldan ah ama kuwa marin-habaabin ah;
aad dhalashada Finland ku qaadatay dhalashada aabaha darteed, aabanimada laga noqday; ama
aad dhalashada Finland ku qaadatay dhalashada hooyada aan ku dhalin darteed, hooyonimadina laga noqday.
Luminta muwaadinnimada FinlandFinnish | Iswidish | Ingiriis
Markii ugu dambeysay ee waqtiga lala simay: 16.11.2021 Boggan war-celin ka soo dir